IVD vatsy | Membranes sy fitaovana manaraka ny onja aorian'izay - BALLYA
FAMPANDROSOANA IVD SY Fitaovana
Fitaovana sy fitaovana IVD ho an'ny Indostria Diagnostika Vitro
Antibody & Antigen Ho an'ny fanamboarana Kit Kit 19 Covid
Antibodies ho an'ny Kit ho fitsapana haingana antigen SARS-CoV-2 orinasa mpamokatra entana
Antigen ho an'ny Kitapo fitsapana haingana antigen COVID 19 orinasa mpamokatra entana
BALLYA Defoamer ho an'ny ELISA sy Chemiluminescence Immunoassay Rapid Test Kit Manufacturing
Fitaovana ho an'ny famokarana kitapo haingana
Membrane nitrocellulose ho an'ny immunochromatography hampivelarana
Antigène vs Antibody
Fa immunochromatography fampandrosoana: fitsapana ELISA, fitsapana haingana volamena koloidaly
BALLYA Nanoparticle volamena fifantohana avo hatramin'ny 100 OD - 200 OD ho an'ny fitsapana fitsapana andrana
Conjugate & Sample Pad
Fa fikorianan'ny sisiny fampiharana
96 lovia tsara, Lovia fantsakana 48, lovia 24 fantsakana, lovia 6 fantsakana
Karatra fanohanana PVC / PS / PET ho an'ny fanandramana mikoriana lateral
Fahasamihafana Swab Nasofaryngeal ary Swab Swab.
Ho an'ny fonosana kitapo fitsapana andrana fidirana (Kitapo sombin-javatra).
Kitapo Desiccant manondro zavatra mety hanala ny hamandoana avy amin'ny zavatra mando.
Kasety mikoriana manaraka ho an'ny fitsapana ny fikorianan'ny sisiny
Tube ohatra ho an'ny Kitapo fanandramana Covid 19 Antibody
Kitapo santionany amin'ny rora
Kitapo santionany amin'ny rora ho an'ny Kitovan'ny andrana Covid 19 Antigen
Kasety mikoriana aorian'izay
Kasety mikoriana aorian'izay ho an'ny Covid 19 Neutralisation Antibody Test
Vahaolana Covid 19 Buffer
Vahaolana Covid 19 Buffer ho an'ny Covid 19 Antigen Saliva Test
Fantsona santionany ho an'ny COVID-19 / Flu A + B Combo Rapid Test
Tube Sampela amin'ny rora
Tube Sampela amin'ny rora ho an'ny Kit SARS-CoV-2 RT-PCR
Kitapo fanangonana rora
Kitapo fanangonana rora ho an'ny Covid 19 Neutralisation Antibody ELISA Test
Covid 19 Buffer Solution Tube
Covid 19 Buffer Solution Tube ho an'ny Kitapo Fanesorana asidra niokleary
Fitaovana fanamboarana IVD
Mpamadika fitsapana haingana
Mpaninjara mikoriana avy eo ho an'ny famokarana fitsapana haingana
Mpamaritra reagent ho an'ny volamena koloidaly
Dispenser Reagent dia dispenser reagent mikoriana
Rafitra famoahana entana
Rafitra famoahana entana dia ny Dispenser mpanome tsy tapaka
Fanapahana lozisialy haingana ho an'ny famokarana andrana amin'ny fikorianana
Mpanapaka Strip Strip mifangaro
Mpanapaka Strip Strip mifangaro dia ampiasaina hanapaka fibre fitaratra
Mpanapaka Strip Strip ohatra
Mpanapaka Strip Strip ohatra no ampiasaina hanapahana akora 318 mm latsaka
Cutter Strip ho an'ny fanodinana fantsom-panandramana mikoriana
Famonoana membrane Ho an'ny famokarana fitsapana fitetezana sisin-tany
Presser Cassette Flow lateral
Presser Cassette Press Rapid ho an'ny fanamboarana kit fanandramana haingana
Masinina lamination mandeha ho azy ho an'ny membrane nitrocellulose sy pad absorbent
Masinina fivoriambe Kitapo fitsapana
Rafitra fivorian'ny automated test
Masinina fanangonana kasety
Ataovy mandeha ho azy ny kasety
Famonoana ranom-bary ho an'ny covid 19 igg / igm vahaolana fitsapana buffer haingana
Masinina fivoriambe haingana
Masinina fanangonana fitsapana haingana be ho an'ny fanandramana mikoriana lateral
Printer mpandeha amin'ny sisiny
Fanonta fanontam-pirinty lateral ho an'ny fanontana lahatsoratra, kaody QR, lamina kasety mikoriana avy eo
Immunoassay Analyzer ho an'ny famakiana valin'ny valin'ny fitsapana fitsapana ny sidina
Fitaovana fanamboarana fitsapana ELISA
Fanaraha-maso ranon-javatra mandeha ho azy rafitra ho an'ny mpampita amin'ny alàlan'ny famokarana ELISA.
Elisa mpanasa vilia
Manasa microplate mandeha ho azy ho an'ny famokarana fitsapana ELISA
Inona no atao hoe IVD?
IVD dia 'in vitro diagnostic', ny fitsaboana IVD dia manondro ny fitaovana fitsaboana, ny reagents in vitro diagnostik sy ny zava-mahadomelina, ny IVD ho toy ny sampan'ny fitaovam-pitsaboana, dia manana famaritana tokana sy fanaraha-maso ara-dalàna avy amin'ny FDA, The Filan-kevitry ny Vondrona Eropeana, SFDA.
Raha ampitahaina amin'ny fanandramana in vivo, ny test in vitro dia mampiasa ny zavamiaina manontolo hitarika fanandramana, izay afaka hahatratra ny maha-karazany ny karazany, izay famakafakana tsotsotra kokoa, mora kokoa ary feno kokoa.
Ny fitaovana fitsaboana diagnostika in-vitro dia manondro ireo fitaovana ara-pitsaboana izay kasain'ny mpanamboatra hampiasaina amin'ny fizahana in-vitro ny santionany azo avy amin'ny vatan'olombelona, ​​ao anatin'izany ny mpamatsy ra sy ny tavy, na ampiasaina irery na miaraka, anisan'izany ny reagents, vokatra reagent, calibration fitaovana, fitaovana fanaraha-maso, Kit, fitaovana, fitaovana fitsaboana, fitaovana na rafitra.
Ao amin'ny Diagnostika Vitro
Amin'ny famaritana Vitro
IVD, amin'ny maha sampana mahaleo tena an'ny fitaovana fitsaboana ivd azy, dia manana ny famaritana manokana sy ny rafitra mifehy, indrindra ny US Food and Drug Administration (FDA) sy ny vondrona eropeana (EC). Ny IVD dia ahitana fitaovana, reagents na rafitra amin'ny diagnostika in vitro. Saingy, hafa ny toe-javatra any Shina. Ny IVD dia tsy miavaka sy voafaritra tsy miankina, izany hoe tsy misy ny fiheverana ny IVD. Ny vokatra diagnostika vitro tafiditra ao amin'ny foto-kevitra IVD iraisam-pirenena dia rava ary an'ny ivd fitaovana fitsaboana (MD), ny reagents fitsaboana in vitro (IVD Reagents) ary ny fanafody.
Any Chine, afa-tsy ny réagents diagnostika in vitro ho an'ny fizahana loharano ra sy ny fampiasana reagents diagnostika in-vitro radionuclide izay voafaritra ho fitantanana zava-mahadomelina, hafa rehetra Vokatra IVD dia eo ambanin'ny fitaovana fitsaboana ivd (MD)
Ny fitsipika (EU) 2017 / 746
Fitsipika USA IVD
Ny reagents diagnostika in vitro (IVD) dia azo zaraina ho biodiagnosis in vitro sy fitantanana fitaovana fitsaboana ivd arakaraka ny fanasokajiana fitantanana.
Biodiagnosis in vitro
Ireo mpitsabo aretin-koditra in vitro tantanan'ny fanafody dia misy:
1. Ireo karazan-drà mifanentana amin'ny ra sy ny tavy;
2. Ireo anti-mikraoba, anti-bakteria ary asidra nukôniôma reagents;
3. Reagents marika fivontosana;
4. Immunohistochemistry sy sela sela sela vatan'olombelona;
5. Reagents fitiliana ny vatan'olombelona;
7. Reagents momba ny diagnostika amin'ny allergy.
Fitantanana fitaovana fitsaboana
1. Reagents fitsapana fototra momba ny klinika;
2. Reagents simika klinika;
3. Reagents amin'ny famaritana gazy rà sy electrolyte;
4. Reagents famaritana vitamina;
5. Toro-tenda histochemical cell;
6. Reagents diagnostika Autoimmune;
7. Reagents fitiliana mikraoba.
Ao amin'ny test Vitro Diagnostic
Misy karazana diagnostika vitro: reagents momba ny diagnostika vitro, reagents immunodiagnostic, reagents diagnostika molekiola, reagents diagnostika mikraoba, reagents diagnostika urin, reagents diagnostika coagulation, hematology, reagents diagnostika cytometric mikoriana ary lateral Flow Immunodiagnostic, sns.
Betsaka ny kitapom-pitsapana lateral Flow IVD izay ampiasaina amin'ny fiainantsika andavanandro. Mora mividy amazona, ebay, fivarotana zava-mahadomelina, tsena fisakafoanana sns ... Ohatra:
Ho an'ny olombelona:
Kitan'ny fitsapana kôlesterôla an-trano ankatoavin'ny FDA
Fitsapana HCG ho an'ny fitondrana vohoka
Fitsapana LH momba ny detection ovulation
Tady fitsapana VIH
Taratasy fitsapana tazomoka
Ho fiarovana ara-tsakafo:
Kitapo fanandramana amin'ny fitiliana ireo residu zava-mahadomelina amin'ny atody, hena, ronono, trondro, vary, sns.
Ho an'ny fahasalaman'ny biby:
Kitapo fitsapana amin'ny fitiliana aretina amin'ny omby, alika, saka, osy, ondry sns.
Orinasa diagnostika 25 vitro ambony
Danaher Corp. (ao anatin'izany ny Radiometer A / S)
Laboratoara fitaovana / Werfen
LabCorp, Laboratory Corporation any Amerika
Diagnostika Vitro Clinical Ortho
Diagnostika Quest Vitro
Diagnostika Roche Vitro (ao anatin'izany ny fitaovana fitsaboana Ventana)
Teknolojia in vitro
Teknolojia 6 amin'ny famatsiana IVD
1. Teknolojia chip microfluidic
Ny chip Microfluidic, fantatra ihany koa amin'ny Lab on a Chip, dia manondro kisarisary fanandramana simia bitika sy miombona ary mandeha ho azy simika namboarina teo ambonin'ny puce iray santimetatra toradroa na latsaka.
Amin'ny alàlan'ny chip microfluidic, ny mpikaroka dia afaka mamita ny asan'ny santionany, ny fitsaboana mialoha, ny fanehoan-kevitra, ny fisarahana ary ny fitiliana ao amin'ny laboratoara simika amin'ny chip mizana mizana, ary hamita ho azy ny fandinihana.
Ny macromolecules biolojika dia misy eo amin'ny ambaratonga nanometer, ary ny fikarohana molekiola tokana dia tsy afa-misaraka amin'ny nanosains. Nanomedicine dia sehatry ny fikarohana nanosains manan-danja mipoitra. Izy io dia sehatry ny fikarohana iraisam-pirenena momba ny fahasalaman'ny vatan'olombelona izay ataon'ny firenena rehetra laharam-pahamehana. Feno fanararaotana sy fanamby amin'ny fanavaozana ara-tsiansa izany.
3. Teknolojia fananganana molekiola tokana an'ny taranaka fahatelo
Ny teknolojia fananganana molekiola tokana an'ny taranaka fahatelo dia tsy mitaky fanamafisana PCR, ary afaka mamantatra molekiola ADN tokana, misoroka ny lesoka sy ny olana momba ny safidin'ny fanamafisana PCR, ary koa manamora ny fanodinana santionany sy ny fizotrany ary ny fanafohezana ny tsimbadika manaraka. .
4. Angon-drakitra lehibe sy faharanitan-tsaina artifisialy
5. Teknolojia tokana miady amin'ny molekiola tokana
(SiMoA) Teknolojia fikarohana maro
SiMoA no fomba immunoassay saro-pady indrindra amin'izao fotoana izao, mitovy amin'ny assay immunosorbent mifandraika amin'ny anzima (ELISA), fa ny fahatsapana dia nitombo in-1,000 XNUMX raha oharina amin'ny ELISA.
Satria amin'ny fomba detection ELISA, ny fluorescence novokarin'ny anzima fanamarihana dia hiparitaka amina faritra marobe, ary tsy azo atao ny mamantatra ny fatran'ny akora simika ambany; raha ny SiMoA dia mampiasa am-pahamendrehana ny fetin'ny femtomole ambaratonga mba hisamborana sy hamantarana molekiola tokana ary hifehezana ny tsy fitovizan'ny fluoresensia, mba hivoarana tsara ny tena marina.
6. Fanodinana santionany amin'ny biopsy biopsy CTC
Ny biopsies misy ranoka ankehitriny dia matetika mampiasa ny CTDNA / RNA, CTC (sela fivontosana) ary ny Exosome (exosome) ao anaty ra ho biomarker amin'ny famaritana fivontosana. Ny biopsy feno ranon-javatra feno dia tokony hampidirina koa ny tsiranoka amin'ny vatana hafa ankoatry ny rà, toy ny fisotrony sy rora, fampahalalana azo avy amin'ny fivontosana amin'ny effusion pleura sy tsiranoka cerebrospinal. Ny sandan'ny klioban'ny biopsy ranon-javatra dia mifototra amin'ny maha-zava-dehibe ireo mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana sy ny fahatsapana ary ny maha-manokana ny teknikan'ny fikarohana sy ny famakafakana.
Fitaovana diagnostika in vitro
1. Nozaraina tamin'ny fomba diagnostika: fitaovana fandinihana simia klinika, fitaovana famakafakan-kevitra momba ny tsimokaretina, fandinihana ra zavamaneno, fitaovana famakafakana mikraoba.
2. Araka ny reagents mifanentana: ny rafitra misokatra sy ny rafitra mihidy.
Fanaovana diagnostika in vitro
Araka ny fitsipiky ny fitsapana: ny reagents diagnostika biokimia, ny reagents immunodiagnostic, ny reagents diagnostika molekiola, ny reagents diagnostika mikrôbiolojika, ny reagents diagnostika urin, ny reagents diagnostika coagulation, ny hematology ary ny reagents diagnostika cytometric.
Orinasa IVD malaza eran-tany
Hatramin'ny 2017, ny orinasa mpamokatra fanafody any Switzerland, Roche, dia nanjary mpitarika manerantany tamin'ny tsenan'ny in vitro diagnostic (IVD), miaraka amin'ny vola miditra amin'ity faritra ity mihoatra ny 10 miliara dolara amerikana. Vinavinaina fa hitazona ny toerany i Roche ary hihoatra ny 14 tapitrisa dolara amerikana amin'ny 2024.
Ny diagnostika Roche dia misy ampahany dimy: ny fikarakarana diabeta, ny fizahana molekiola, ny aretin'antoka afovoany, ny fitsapana ny marary akaiky ary ny siansa ampiharina. Ny fikarakarana diabeta sy ny sampana fitiliana diagnostika dia samy mitaky ny 70% amin'ny karaman'ny departemanta, ary ny 35% kosa dia samy mitentina XNUMX%.
2. Laboratoara Amerikana
Niorina tamin'ny taona 1888 ary manana foibe any Illinois, Etazonia; Abbott Laboratories dia mandray anjara amin'ny fahitana, fampandrosoana, fanamboarana ary fivarotana vokatra ara-pahasalamana. Ny orinasa dia miasa amin'ny alàlan'ny sehatry ny orinasa efatra, dia ny fanafody matotra, vokatra diagnostika, vokatra ara-tsakafo ary vokatra kardiojika sy neuromodulation. Ny orinasa IVD dia manome ny Vitro Diagnostic Products Business Unit, izay misy diagnostika vitro ao amin'ny laboratoara, diagnostika vitro molekiola, fitandremana fitandremana, diagnostika vitro haingana, ary diagnostika ibis. Tamin'ny volana oktobra 2017 dia nahazo ny orinasa Alere Inc. ny orinasa hanamafisana ny portfolio-ny vokatra fikarakarana (ampahan'ny diagnostika IVD) portfolio portfolio.
Niorina tamin'ny 1969 ary manana foibe any Washington, Etazonia; Danaher Corporation dia mamolavola, manamboatra ary mivarotra fitaovana sy serivisy matihanina, ivd, indostrialy ary vokatra ara-barotra. Ny orinasan'i Danaher dia misy fizarana efatra: siansa fiainana; diagnostika vitro; vahaolana nify sy tontolo iainana ary fampiharana. Ny orinasa dia manome fitaovana fandalinana mifandraika amin'ny IVD, reagents, fanjifana, rindrambaiko ary serivisy amin'ny sehatry ny asa diagnostika vitro. Ireo vokatra ireo dia zaraina amin'ny marika APERIO, BECKMAN COULTER, CEPHEID, HEMOCUE, IRIS, BIICYSTEMS LEICA, MAMMATOME, RADIOMETER ary SURGIPATH. Ny orinasa dia manome ireto vokatra ireto any amin'ny hopitaly, biraon'ny dokotera, laboratoara fanovozan-kevitra ary tobim-pitsaboana lehibe.
4. Ny sandan'ny anjara Thermo Fisher Scientific Inc.
Niorina tamin'ny 2006 ary manana foibe any Waltham, Etazonia; Thermo Fisher Scientific Inc. dia manolo-tena hanome fanadihadiana ho an'ny fikarohana, ny famokarana, ny famakafakana, ny fahitana, ary ny diagnostika eo ambanin'ny marika Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, ary Unity Lab Services Instruments, fitaovana, reagents ary azo ampiasaina, rindrambaiko ary serivisy. Manome vokatra IVD ho an'ny hopitaly, laboratoara fitiliana diagnostika, oniversite ary andrim-pikarohana ny orinasa. Ny orinasa dia miasa sehatr'asa efatra, dia ny fitaovana enti-mamakafaka, ny vahaolana momba ny siansa fiainana, ny vokatra sy ny serivisy ary ny serivisy manokana. Ny orinasa dia manome vokatra IVD eo ambanin'ny sehatry ny orinasa diagnostika vitro.
5. Laboratoara Bio-Rad, Inc.
Niorina tamin'ny 1952 ary manana foibe any California, Etazonia; Bole Lab Co., Ltd. dia mirotsaka amin'ny fanomezana fitaovana, fanjifana ary rindrambaiko ho an'ny fanamafisana ny proteinina, biolojika sela, fiarovana ara-tsakafo, fanadiovana proteinina, fitenenana, fahitana zava-mahadomelina ary famokarana siansa. Ny vokatra sy ny vahaolana avy amin'ny orinasa dia mifototra amin'ny teknolojia fanasarahana, fanamasinana, fanondroana, famakafakana ary fanamafisana ny akora biolojika (toy ny sela, bakteria, antibodiôma, proteinina ary asidra niokleika). Ny orinasa dia miasa amin'ny alàlan'ny sehatry ny orinasa telo, dia ny siansa fiainana, ny diagnostika klinika ary ny asa hafa. Ny orinasa IVD dia manome vokatra eo ambanin'ny sehatry ny orinasa diagnostika.
6. Diagnostika klinika Ortho
Niorina tamin'ny taona 1994 ary manana foibe any New Jersey, Etazonia; Ortho Clinical vitro diagnostic dia manolo-tena amin'ny famokarana sy fanomezana vokatra IVD ho an'ny laboratoara klinika sy ny immunohematology. Ny orinasa dia manome ny vokariny amin'ny alàlan'ny departemanta fanafody simika sy immunodiagnostic ary fampidiran-dra. Ny orinasa IVD dia manome vokatra toy ny rafitra simika mifangaro, ny rafitra immunodiagnostic, ny automatisation laboratoara ary ny vahaolana afovoany.
Niorina tamin'ny 1968 ary manana foibe any Kobe, Japon; Sysmex Corporation dia fantatra amin'ny anarana hoe TOA Medical Electronics Co., Ltd. ary nomena anarana hoe Sysmex Corporation tamin'ny Oktobra 1998. Ny orinasa dia mirotsaka amin'ny fampandrosoana, famokarana, varotra ary fanafarana ary fanondranana fitaovana diagnostika, reagents ary rindrambaiko mifandraika amin'izany. Ny orinasa dia manompo hopitalim-pirenena sy hopitalim-panjakana hafa, hopitaly tsy miankina, oniversite, andrim-pikarohana ary andrim-pitsaboana hafa.
8. Becton, Dickinson ary ny Orinasa
Niorina tamin'ny 1897 ary manana foibe any New Jersey, Etazonia; Becton, Dickinson ary ny orinasa dia mirotsaka amin'ny fampandrosoana, fanamboarana ary fivarotana fitaovam-pitsaboana ivd, kojakoja, fitaovana laboratoara ary vokatra diagnostika ho an'ny toeram-pitsaboana fitaovana, mpikaroka momba ny siansa fiainana, laboratoara klinika, Indostrian'ny fanafody ary ampiasain'ny besinimaro. Ny orinasan'ity orinasa ity dia misy tarehim-barotra roa, dia ny fitaovana BD Medical sy ny BD Life Sciences. Ny BD Life Science dia manome vokatra ho an'ny fanangonana azo antoka sy fitaterana ireo santionan'ny diagnostika vitro, ary koa ny fitaovana sy ny rafitra reagent amin'ny fitiliana ireo areti-mifindra isan-karazany, ireo aretina mifandraika amin'ny fitsaboana (HAI), ary ny homamiadana.
Niorina tamin'ny 1963 ary manana foibe any Marcy l'Etoile, France; bioMérieuxSA dia mirotsaka amin'ny fampivelarana sy famokarana vahaolana IVD (rafitra, reagents ary rindrambaiko) ary laboratoara hopitaly, natao indrindra ho fitiliana aretina azo avy amin'ny areti-mifindra, nefa koa ho fitadiavana ireo sakafo fambolena sy fanafody ary vokatra bitika amin'ny kosmetika.
Niorina tamin'ny 1968 ary manana foibe any Saluggia, Italia; DiaSorin SpA dia manolo-tena amin'ny fampandrosoana, famokarana ary fanaovana varotra fitiliana diagnostika vitro ho an'ny sehatry ny klinika maro karazana. Ny orinasa dia manome fanadinana mahazatra sy matihanina amin'ny sehatry ny klinika maro karazana, toy ny areti-mifindra, aretin'ny gastrointestinal, taolana sy mineraly, endocrinology, hypertension, oncology, hematology tumor, ary autoimmunity.
Orinasa lehibe IVD sinoa
Daan Gene dia orinasam-teknolojia avo lenta momba ny biômatika izay mampiditra teknolojia diagnostika molekiola ho antony lehibe indrindra, mampifangaro ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fivarotana ny reagents sy ny fitaovana fitiliana klinika, ary koa ny serivisy fitiliana klinika an'ireo laboratoara nasionaly ivd.
Keue Bio-Engineering orinasa lehibe manarona reagents diagnostika in vitro sy fitaovana fitiliana fitaovana fitsaboana ivd. Ny vokatra azo havaozina dia manarona ireo faritra telo lehibe amin'ny immunodiagnosis, famaritana biokimika ary famaritana molekiola ao amin'ny IVD. Ny vokatra azo avy amin'ny fitaovana dia manana andiany mpandinika biokimia, andiam-panafody ary chemiluminescence Ny andiana fitaovana dia manana vokatra IVD feno kokoa. Ny tombony nentin-drazana dia eo amin'ny sehatry ny immunodiagnosis.
Leadman dia orinasa isan-karazany izay manana fifaninanana amin'ny sehatry ny biokimia, reagents in vitro assay ary fitaovana fitsaboana ivd. Ny vokatra lehibe azo avy amin'ny reagents diagnostika dia reagents biokimia, ary mivoatra eo amin'ny sehatry ny chemiluminescence immunoluminescence.
Strong Biotechnologies dia orinasa iray manana reagents fitiliana diagnostika biokimika feno ary fitaovana mpandinika biochemika mandeha ho azy manerantany. Ny orinasa dia nanangana fifandraisana fiaraha-miasa stratejika biokimika amin'ireo orinasa fanta-daza vahiny in vitro diagnostic.
Wondfo Biotech dia orinasa natokana ho an'ny vokatra fitiliana haingana (ao anatin'izany ny reagents sy ny zavamaneno) ao amin'ny indostrian'ny diagnostika biomedical in vitro, ao anatin'izany ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny varotra. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny sehatra fitiliana isan-karazany POCT, vokatra logo isan-karazany ary maro samihafa fitsapana Products.
Ny fitaovan'ny Dirui Medical dia orinasa iray mikotrika urinalysis, famakafakana ny ampahany amin'ny urine, famakafakana biokimika, fandalinana sela sela ary vokatra hafa ary ireo reagents taratasy fanandramana mifandraika amin'izany.
Meikang Bio dia orinasa iray izay ny indostria lehibe indrindra dia ny reagents diagnostika in vitro, fitaovana ary serivisy fitiliana fitsaboana iraisan'ny antoko fahatelo.
Sinocare Bio dia orinasa natokana ho an'ny fampandrosoana, famokarana ary fivarotana vokatra ho an'ny fikarohana haingana ny aretina mitaiza amin'ny fampiasana teknolojia biosensing.
Maccura Bio dia orinasam-pikarohana sy famokarana izay mifangaro amin'ny diagnostika vitro. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny vokatra biokimika, vokatra chemiluminescent, vokatra fitiliana haingana ary vokatra fitiliana ra.
Hybribio Bio dia orinasa mifantoka amin'ny fikarohana tsy miankina sy ny fampandrosoana ny teknolojia diagnostika molekiola ary manitatra mavitrika ny sehatry ny fampiharana ny teknolojia diagnostika molekiola asidra nokleika.
BALLYA miasa amin'ny fikarohana lateral Flow Immunodiagnostic & fampandrosoana mihoatra ny 12 taona. Indrindra amin'ny sehatra Colloidal gold & Fluorescence, nanangana karazana 8 izahay kitapo fitsapana fototra amin'ny sehatra roa. Mifantoka amin'ny kitapom-pahaizana momba ny fiarovana ny sakafo isika, nefa koa mandinika sy mikaroka bebe kokoa amin'ny fitaovana fitsaboana IVD ho an'ny vatan'olombelona.